kid – စာမကျြနှာ3– Healthy Life Journal
ဒေါက်တာသီရိ (MBBS,MPH,DCH) အသက်ခြောက်လမှ ခြောက်နှစ်ကြား ကလေးတွေမှာ အဖျားကြီးပြီးတတ်ခြင်း ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ကလေးအယောက်၃၀မှာ တစ်ယောက်လောက် ဖြစ်လေ့ရှိပြီး အများအားဖြင့် ဘေးဥပဒ်အန္တရာယ် မရှိသလိုဦးနှောက်ကိုထိခိုက်တာမျိုးလည်းမရှိပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ကလေးတက်သွားတာကို မြင်သိလိုက်ရတဲ့ မိဘတွေအတွက်တော့အရမ်းကိုစိတ်ပူပြီး ခြေမကိုင်မိလက်မကိုင်မိ အခြေအနေမျိုးပါပဲ။ အဖျားကြီးတယ်ဆိုတာ တကယ်တော့ ကိုယ်ခန္ဓာမှာ...
ကျောင်းတက်နေတဲ့ ကလေးကို ဘယ်လိုသရေစာ ထည့်ပေးသင့်သလဲ
ဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့် (အာဟာရဆိုင်ရာ အထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) မေး. အခုဆိုရင် ကလေးတွေကျောင်းဖွင့်တော့ နေ့လယ်စာထမင်းဘူးအပြင် သရေစာမုန့်လေးတွေပါ ထည့်ပေးရပါတယ်။ မုန့်ဖိုးလည်း မပေးချင်သေးဘူးလေ။ အဲဒါ ဘယ်လိုသရေစာတွေကို ထည့်ပေးသင့်ပါသလဲ။ ဘယ်လို မုန့်ပဲသရေစာက ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်မှုရှိပါသလဲရှင်။ မ၀င့်ဝါမော်၊ တောင်ဥက္ကလာ။ ဖြေ....
ကလေး ၀မ်းချုပ်တဲ့ ပြဿနာ
မေး ။ ကျွန်တော့်သားလေး ၁နှစ် ၂လရှိပါပြီ။ ၀မ်းကို သုံးရက်တစ်ခါ ချူပေးနေရတယ်။ ၀မ်းမချူရင် မသွားဘူး။ ဘာတွေလုပ်ဖို့လို့အပ်ပါလဲ အကြံပေးပါဦး ခင်ဗျာ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ Naw Si (Fb) ဒေါက်တာငြိမ်းအေးဝင့် (ကလေးအထူးကုဆရာဝန်ကြီး) မှ ပြန်လည်ဖြေကြားပေးပါသည်။ ဖြေ...
ကလေးခေါင်း အနည်းငယ်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်း (Minor Head Injury / Concussion)
ဒေါက်တာသီရိ (MBBS,MPH,DCH) တစ်ခါတရံ ကလေးတွေဆော့ကစားရင်းဖြစ်စေ၊ မတော်တဆဖြစ်စေ ခေါင်းကိုထိခိုက်မှုဖြစ်တဲ့အခါ မိဘအုပ်ထိန်းသူတွေအနေနဲ့ ဆေးရုံပို့ရမှာလား၊ ဦးနှောက်ထိပြီး ဥာဏ်ရည်တွေ နိမ့်သွားတော့မှာလား၊ အသက်အန္တရာယ်များရှိလား စသဖြင့် စိုးရိမ်ပူပန်မှုများစွာဖြစ်စေပါတယ်။ ကလေးငယ်တွေအတွက် ခေါင်းပေါက်၊ ခေါင်းကွဲ၊ ဖူးရောင်တာတွေက ဖြစ်လေ့ရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒါက စိုးရိမ်စရာလိုလား...
တီဗီကြည့်ခြင်း၊ ဂိမ်းဆော့ခြင်းနှင့် ကလေးမျက်စိကျန်းမာရေး
ပါမောက္ခဦးတင်ဝင်း(မျက်စိအထူးကုဆရာဝန်ကြီး)နှင့်တွေ့ဆုံခြင်း မေး. တစ်နှစ်သားအရွယ်ကလေးတွေ တီဗီအကြည့်များတာကြောင့် မျက်စိမှာဘယ်လိုထိခိုက်မှုဖြစ်တတ်ပါသလဲ ဆရာ။ ဖြေ. တစ်နှစ်သားအရွယ်ကလေးတွေ တီဗီအကြည့်များတာကြောင့် မျက်စိမှာ ဘယ်လိုထိခိုက်မှုမှ မရှိဘူးလို့ပဲပြောရမယ်။ မျက်စိရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာက ကြည့်ဖို့ပဲဖြစ်တာကြောင့် တီဗီကြည့်တာက အမြင်အာရုံလှုံ့ဆော်မှုတစ်ရပ် (Visual Stimulus) ဖြစ်လို့ပါ။ တစ်နှစ်သားအရွယ်ဆိုတော့ ဖွံ့ဖြိုးတဲ့အဆင့်မှာပဲ ရှိသေးတဲ့အတွက်...